मुकुन र सुरविनाको 'के माया लाग्छ र!'
मुकुन र सुरविनाको ‘के माया लाग्छ र!’
४ वर्ष अगाडि • ६०० पटक पढिएको
‘के माया लाग्छ र?’ नवीनले निर्देशन गरेको यसअघिको उनको चर्चित गीत ‘लुकी छिपी किन मायामा’ को ‘प्रिक्वेल’ हो। यसमा लुकिछिपी किन मायामाको कथा जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यो भन्दा अगाडिको कथा देखाइएको छ।
पुरानो समयको परिवेश चित्रण गरिएको भिडियोमा मुकुन भुसाल र सुरविना कार्कीको अभिनय छ। ‘लुकी छिपी किन मायामा’ गीतमा यी दुई पात्र मायामा डुबिसकेको देखाइएको छ। के माया लाग्छ र? गीतमा भने यी दुई पात्रबीच अंकुराउँदै गरेको मायाको भावको चित्रण छ।